Sina matanjaka sy mahitsy bararata rindrina rindrina tarehy tontonana fanamboarana sy orinasa | Volotsangana Volamena
Ny volotsangana dia fitaovana mateza be ho an'ny fonony. Ny takelaka mitafy volotsangana dia tsara ary tsara tarehy. Ny tontolon'ny rindrina vita amin'ny rindrina REBO® vita amin'ny rindrina dia nanao kilasy C class C, izay midika fa tsy mora ny mirehitra. Maromaro ny tombony azo avy amin'ny akora fitondra volotsangana:
Ny hazo volotsangana dia be mpampiasa amin'ny fananganana sy ny trano, ary mizara ho volotsangana sy volotsangana any ivelany arakaraka ny toerana misy azy. Araka ny toerana misy azy dia ampiasaina amin'ny takelaka rindrina, gorodona ary valindrihana mihantona izy io. Ny hatevin'ny valin'ny rindrina dia 12mm sy 18mm. Ny tontonana matevina vita amin'ny rindrina vita amin'ny volotsangana dia vokatra iray nataon'ny fitsaboana manokana amin'ny alàlan'ny tabilao vita amin'ny volotsangana mavesatra any ivelany.
Ny firakotra rindrina vita amin'ny volotsangana dia ny vokatra namboarina avy amin'ny volotsangana vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy. Ny tontonana rindrin'ny volotsangana dia misy fihenam-bidy kely sy tahan'ny fivontosana, tsy mora simba, manohitra ny harafesina, mahatohitra rano ary manohitra ny toetr'andro. Manana fitoniana mafy izy io, ary nandalo ny andrana nahandro naharitra 72 ora. Ampiasaina betsaka amin'ny rindrina ravaky ny villa, hotely ary klioba izy io. Ny tontonana matevina amin'ny rindrina vita amin'ny volotsangana dia malaza ihany koa amin'ny ravaky ny zaridaina tsy miankina, noho ny toetra maha-olona sy mahasalama ny tontolo iainana.
1) Ny endrika voajanahary sy tsara tarehy
2) Tena mateza, maharitra ary matanjaka
3) mahatohitra afo (Kilasy B)
4) Vmahitsy sy maharitra
Teo aloha: Rihana volotsangana vita amin'ny karbaona matevina sy matevina
Tontonana mitafy bambava
Ny volondavenona vita amin'ny karbaona mahery sy matanjaka ...
Fanerena mafana kalitao tsara any ivelany any volotsangana ...
E1 Eurpean fenitra ara-tontolo iainana eko-friendly volkano ...
Loko mainty tsy misy volavolan-drakotra vita amin'ny volotsangana